Etu ibudata na kpọọ Mario Kart Tour na PC | Gam akporosis
O doro anya na Mario saga bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na mpaghara egwuregwu vidiyo ekele nke ọ bụla n'ime nnyefe ndị na-ahụ ìhè. Onye ọkwọ ụgbọ mmiri a maara nke ọma na-ahụ otú o si pụta n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ kwadoghị aha naanị maka nyiwe.
Mario Kart Tour bụ nsụgharị maka ngwaọrụ mkpanaka nke rụzuru ihe ngosi nke ihe karịrị nde 50 nbudata na Storelọ Ahịa Play, na iOS ọnụ ọgụgụ ahụ yiri nke ụlọ ahịa Google. Taa Mario Kart Tour nwere ike ibudata ma kpọọ na PC, ekele emulators na ụfọdụ ngwa.
Ndị ọrụ PC ga-enwe ike ịnụ ụtọ aha a ma ama na nnukwu ihuenyo, na mgbakwunye na mkpebi zuru oke ma na-anya ụgbọ ala ahụ na keyboard na ọbụlagodi ihe egwuregwu. A tọhapụrụ Mario Kart Tour na 2019, mana ọbụlagodi taa ọ ka bụ otu n'ime egwuregwu vidio kachasị egwu.
1 Etu ibudata Mario Kart Tour na PC
2 Na BlueStacks
3 Mụ na MeMu Play
4 Na gị Samsung ekwentị Companion
Etu ibudata Mario Kart Tour na PC
Nanị ụzọ ị ga-esi egwu egwuregwu a bụ site na nbudata ngwa ahụ, a file na-agụ site na gam akporo sistemụ, ma ọ bụghị iche. E nwere ọtụtụ Windows na Mac Os emulators na-eme ya kwa, gụnyere ụfọdụ ndị a maara dị ka BlueStacks, MeMu, Nox Player, n'etiti ndị ọzọ.
Ohere ọzọ imere ya na PC sitere na ekwentị Samsung na ngwa Ekwentị Ekwentị gị, nke a ezuola. Nhọrọ na-abawanye na nhọrọ a, ihe niile a na-etinye ekwentị gị na njedebe nke ụlọ ọrụ South Korea.
Ha bụ naanị ụzọ abụọ iji nwee ọ gameụ egwuregwu a dị egwu na PC, ebe ọ bụ na enweghị ọdụ ụgbọ mmiri nke ikpo okwu mkpanaka na Windows / Mac n'oge ahụ. Nintendo echebeghị echiche kemgbe ya igba egbe weta ya na kọmputa na ọ bụ ugbu a nke ajụjụ na anyị na-ahụ ya.
BlueStacks bụ emulator na-enye ohere ka egwuregwu ọbụla gbaa ọsọ na PC site na ikpo okwu gam akporo, nakwa Mario Kart Tour. Anyị chọrọ ngwa maka Windows / Mac na APK, faịlụ a na-ebudata na Storelọ Ahịa Play ozugbo anyị banye na akaụntụ Google anyị.
Enwere ike ibudata ya iche iche, mekwara ya ọnụ ma ọ bụrụ na anyị achọ Mario Kart Tour na nchọta Google, nbudata ngwa ahụ na mbụ, mgbe ị jikọtara akaụntụ ahụ, a ga-etinye aha ahụ. Nhọrọ abụọ dị mma, ọ bụ azịza ngwangwa yana karịa ihe niile dị mfe ịme.
Ngwa BlueStacks nwere njikwa egwuregwu vidiyo ugbua preset maka aha, MOBA mode, égbè mode, macros na nhazi nwekwara ike gbanwee ka anyị chọọ. Na mgbakwunye na iji keyboard, ohere ọzọ bụ inye onye njikwa ka igwu egwu nke ọma.
Mbụ ị ga-ebudata BlueStacks ma mee usoro ndị a iji mezuo ya:
Budata ngwa BlueStacks, dị mkpa iji mee ka Mario Kart Tour rụọ ọrụ na PC, mee ya site na akwukwọ ọrụ
Ozugbo ebudatara ngwa ahụ, wụnye ma chere usoro iji duzie gị site na usoro dị iche iche ruo mgbe nrụnye ya zuru ezu, nke a ga-ewe nkeji ole na ole, ebe ọ ga-ejikọrị na sava ahụ, nata ihe niile ma nye ya ikikere kwekọrọ
Budata Mario Kart Tour ugbu a site na Storelọ Ahịa Play, APK dị ihe dịka 129 megabytes
Tinye nkọwa nke Storelọ Ahịa Play, I nwere ike iji ya jikọọ ya na ekwentị gị n'enweghị nsogbu, nhọrọ ọzọ bụ iji ọzọ, maka nke a ị nwere ike ịmepụta akaụntụ Gmail ọhụrụ ma were ya na BlueStacks naanị iji nwee ike ịkpọ aha ọ bụla ma ọ bụ wụnye ngwa site na ndị dị na ụlọ ahịa Google Play, ha niile na-arụ ọrụ na 99% nke ikpe
Pịa na "Wụnye APK" na akuku aka nri ala si Malite ihuenyo chọta faịlụ na PC gị, họrọ faịlụ na pịa "Open" rụchaa
Nke abụọ usoro Ibu Ibu egwuregwu na-enweghị nbudata na ngwa site na Storelọ Ahịa Play na PC gị bụ ihe ndị a:
Ozugbo awụnyere BlueStacks na PC gị ma mekọrịta akaụntụ Play Store, ị nweelarịrị ụlọ ahịa Google, n'ime ya ị nwere ngwa niile ị nwere, gụnyere Mario Kart Tour
Ẹkedori BlueStacks na-aga "My Games", wee pịa na "Google Play Store"
Ozugbo ịpịrị Playlọ Ahịa Google Play ị ga-enweta ụlọ ahịa ahụ, ị ​​nwere igwe nyocha, tinye aha aha "Mario Kart Tour" wee kụọ "Wụnye", chere ka o were ya oge ibudata ma wụnye
Ozugbo arụnyere ị ga-enweta «egwuregwu m» na ị ga-ahụ ya dị ka otu akara ngosi karịa ndị ahụ ga-adị site na oge mbụ
Mụ na MeMu Play
Otu n'ime ụzọ iji kpọọ ya bụ iji emulator ọzọ, ọ naghị adị arọ n'ihi na ọ naghị eri ọtụtụ ihe, n'etiti ihe ndị ọ chọrọ, ọ na-arịọ maka nhazi ihe dị n'etiti, 4 GB nke RAM, 4 GB nke diski ike na DirectX 11 / Mepee nkwado GL 2.0. Iji Memu Play ị nwekwara ike i emomi ụdị egwuregwu gam akporo ọ bụla, yana ngwa dị iche iche.
Ọrụ Mario Kart Tour na PC Ọ ga-abụ otu ihe ahụ na ahụmahụ na ekwentị, ọ na-nwere yiri chọrọ ka ndị ọzọ na emulator. Emeela Memu Play ka ị nwee ike ịgba ọsọ ọ bụla APK, mana cheta ibudata site na isi mmalite.
Memu Play na-enye otu nhọrọ ahụ iji kpọọ Mario Kart Tour, na njikwa njikwa ahazi na keyboard na òké, nhọrọ mbụ bụ mgbe ọ bụla n'ime ihe kachasị mma maka ịmegharị ngwa ngwa. Ọrụ keyboard ga-adịkarị ka ọ dịka, ya na igodo mmegharị anọ ahụ, na-ewepụghị bọtịnụ enwere ike ịhazi maka omume dị iche iche.
Iji wụnye MeMu Play na Mario Kart Tour mee usoro ndị a:
Ihe mbu na ntoala bu ibudata ngwa Memu Play, budata .exe na weebụsaịtị ya ebe a
Wụnye ngwa na zere ịwụnye ngwa ndị ọzọ MeMu tụrụ aro, ebe ọ bụ na ha bụ ngwa nke na-agaghị enye anyị ihe ọ bụla ọzọ karịa faịlụ na-enweghị isi na PC anyị
Malite ugbu a Mario Kart Tour na otu oge ọ jụrụ gị ịbanye data site na Storelọ Ahịa Play tinye ndị ị na-eji na ekwentị ma ọ bụ akaụntụ ọhụrụ ọzọ iji jikọta, ọ dị mkpa ka ị nwee ike igwu egwuregwu ịgba ọsọ na ndị ọzọ dị na ụlọ ahịa ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ iji mepụta ihe ọzọ ị nwere ike ịme ọhụụ na Gmail naanị n'okpuru nkeji abụọ, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwu na ndị emulators, ma BlueStacks, Memu Play or Nox Player
Na gị Samsung ekwentị Companion
Ọ bụrụ na ị nwere Samsung ngwaọrụ, ị ga-achọ ekwentị na ngwa iji nụ ụtọ Mario Kart Tour na PC. Ezi nkwekọrịta nke Microsoft na Samsung emeela ka ha nwee ike iweta ọtụtụ njirimara nke ekwentị na Windows, ma ọ bụ ịkpọ ma ọ bụ tụba anyị egwuregwu site na nnukwu ihuenyo.
Ọ bụrụ na ị na-eji Windows 10 ugbu a ma chọọ igwu egwu Mario Kart Tour na PC, ịkwesịrị ijikọ ya, njikọ nke a ga-eji kọmputa anyị mee ozugbo. Na gị Samsung ekwentị Companion anyị nwere ike inwe ihe dị mkpa na ahụmahụ na-enweghị nwere iji ma nke abụọ kwuru emulators.
Iji enyi ekwentị gị anyị nwere ike ịkpọ site na PC, dị ka a ga - asị na ị na - eme otu site na ngwa nke ndị dịnụ. Ọnụahịa ahụ ga-abụ nke gị na ụlọ ọrụ gị nwere, ma ọ bụ nkeji nkwekọrịta, ọ bụrụ na anyị nwere onye na-akparaghị ókè, anyị agaghị atụ ụjọ ọ bụla.
Usoro iji mekọrịta mmekọrịta a bụ ndị a:
Anyị na-ebudata e Anyị na-etinye ngwa Ekwentị Ekwentị gị na Storelọ Ahịa Play
Njikọ na Windows
Ozugbo arụnyere, chọọ ụzọ mkpirisi site na ịpịgharị site na elu ruo na ala ịchọta ya, akpan akpan ọ na-ekwu «Njikọ na Windows» na-egosi na akara ngosi abụọ, nke ekwentị na ihuenyo, pịa ya iji rụọ ọrụ ya
Ozugbo igbe ahụ na-arụ ọrụ, anyị ga-agbaso usoro ole na ole iji jikọọ ngwaọrụ na PC na Windows 10 dị ka sistemụ arụmọrụ, enwere ike ịme ya na ụdị a, ọ naghị arụ ọrụ na ndị gara aga dịka Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ma ọ bụ Windows 8
Ọ bụ oge awụnyere na smartphone, maka nke a budata ngwa ahụ na Storelọ Ahịa Play (njikọ dị n'okpuru)
Ozugbo arụnyere aha Mario Kart Tour, anyị na-aga PC ma bido ya na “Ngwa”
Mgbe emechara ya, ọ ga-egosi gị ihuenyo na egwuregwu ahụ, I nwekwara ike iji ngwa ndị ọzọ n'otu oge, ya mere na ị nwere nhọrọ a gụnyere nke ikwu okwu na ekwentị ma ọ bụrụ na ịchọrọ mgbe ị na-egwu egwu, yana iji ngwa ndị ọzọ na-enweghị mkpa ịkwụsị
Iji ekwentị Ekwentị ị nwere ike iji ngwa nke ekwentị gịgụnyere ịza ozi ederede, ịkpọ na ịnweta oku, na ịlele ọkwa niile. Ọzọkwa, chefuo iziga onwe gị foto site na email, nyefee ha niile n'aka onye nchịkwa.
Maka ọtụtụ ụdị Samsung, ị nwere nhọrọ nke ịdọrọ na idobe faịlụ site na ọnụ ya na PC, ịnweta ngwa arụnyere, gụnyere egwuregwu vidiyo. I nwekwara ike idetuo na mado ederede, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ maka njikọta n'etiti ngwa na Windows.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Etu ibudata na kpọọ Mario Kart Tour na PC